Izindaba - Automechanika Shanghai
I-Automechanika Shanghai yaziwa kakhulu ngokuthi iShanghai yamazwe omhlaba izingxenye zemoto embukisweni wokulondolozwa kokuhlolwa kokuhlinzekwa kwemishini yokuhlinzekwa kwemishini, ingumbukiso omkhulu wezimoto ngemuva kokuthengisa e-Asia, futhi ingumbukiso wesibili ngobukhulu emhlabeni we-Automechanika ngemuva kombukiso omkhulu eFrankfurt, eJalimane. Isebenzisana neminye imibukiso eyi-15 ye-Automechanika emhlabeni wonke ukwaba izinsiza zomthengi zomhlaba wonke nokunikeza isiqinisekiso sekhwalithi.
Idili lomdlalo wemboni yezimoto kusukela ngo-2004, ngemuva kweminyaka engu-13 yentuthuko esheshayo, i-Atomechanika Shanghai iguqukele ekubeni yipulatifomu ekhethwayo embonini yezimoto yomhlaba wonke yokushintshaniswa kolwazi, ukukhuthazwa komphakathi, ezemfundo, ukumaketha nokuhlanganiswa kwezohwebo.
I-16th Automechanika Shanghai ibibanjwe kusukela ngoDisemba 3-6, 2019 emhlanganweni kazwelonke waseHONGQIAO nasendaweni yokubukisa eShanghai.Indawo yombukiso kulindeleke ukuthi ifinyelele ngaphezu kwamamitha-skwele angama-36,000 ngo-2019, ihehe ababonisi abangaphezu kuka-6 500 nabathengi bekhwalithi abangu-150,000 nezivakashi eziqeqeshiwe kusuka kuwo wonke umhlaba.
Imikhiqizo ekhonjisiwe kulo mbukiso yimikhiqizo eyinhloko yenkampani, ikhwalithi ephezulu, izinhlobo eziningi zezicelo, ezifanele ukuthambisa isikhathi eside.Senze intuthuko yesikhathi eside embonini yamafutha eminyakeni yamuva, sithatha indlela yokuthuthuka ephezulu imikhiqizo yokugcina, futhi ukuthuthukiswa komkhiqizo kuzinzile, uPetroking ubambe isikhundla esibalulekile emkhakheni wamafutha onekhono lokusebenza kahle kwemakethe. Noma kunjalo, siyazi ukuthi luselude ukhalo okusamele luhambe. Sizoqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha, sisheshise inqubo yokwakha uphawu lwe-PETROKING, sibhekane ngokufanele nezidingo zemakethe, futhi sakhe imikhiqizo esezingeni eliphakeme yokusiza inqwaba yabasebenzisi.
Ekupheleni kombukiso, umphathi wethu oqondisayo uSimon wamukela ingxoxo nabezindaba zasekhaya, njengomunye wabakhiqizi abakhulu bamafutha nabathambisa eChina.
SI-PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD sihambele lo mhlangano omkhulu njengoba bekuhleliwe, futhi samukela amakhasimende amasha namadala ukuthi avakashele idokodo futhi axoxisane ngebhizinisi.
Idokodo lethu elingu-No. 5.2N27, siyabonga ngokuhambela kwakho